SD Compostela - Wikipedia
Sociedad Deportiva Compostela dia ekipa mpilalao baolina kitra Espaniola monina ao Santiago de Compostela, ao amin'ny vondron'olona mitokana ao Galicia. Milalao lalao any an-trano ao amin'ny Estadio Multiusos de San Lázaro izy ireo, ary mifaninana amin'ny Segunda División B - vondrona 1.
Ekipa antsoina hoe Compostela Foot-ball Club no natsangana tamin'ny taona 1928, nitsahatra tsy nisy tamin'ny 1946. Tamin'ny 26 Jona 1962 nisy ekipa vaovao noforonina antsoina hoe Sociedad Recreativa Compostela, ary ny 28 Oktobra 1962, ny SR Compostela vao niforona dia niaraka tamin'ny ekipa hafa , Club Arenal, manova anarana ho Sociedad Deportiva Compostela. Ny folo taona 1970 dia tsy ara-dalàna. Ny ekipa dia nilalao tamin'ny Tercera División, tamin'ny sokajy Regional ary tamin'ny Segunda División B. vaovao Ny fampiroboroboana azy voalohany tamin'ny dingana manasa-pirenena dia niseho tamin'ny taona 1977, niaraka tamin'ny fanandratana an'i Segunda División B (vondrona 1), izay naharitra iray taona monja; Nampiroborobo indray ny Compos tamin'ny 1980, maharitra enin-taona izao.
Ny fihenan-tsasatra tamin'ny taona 1986 dia nampitombo ny fifanolanana an-kianja manodidina ny fihetsiky ny filoha Francisco Steppe. Nametra-pialana izy tao anatin'ny fiampangana ny fahazoana fandoavam-bola handrava lalao manohitra an'i Pontevedra CF, izay hiantoka ny fitazomana ny mpanohitra amin'ny sokajy. Ny faran'ny 1980 dia nahita fanarenana lehibe ny klioba na teo amin'ny sehatry ny fitantanana sy ny fitantanana ary, tamin'ny 1990, dia nahazo ny toeran'ny ambaratonga fahatelo i Compostela.
Ny fanentanana manaraka dia ny hanaporofoana ny fahombiazan'ny klioba hatramin'izao. Tamin'ny 23 Jona 1991, vahoaka 8000 tao amin'ny Estadio Municipal Santa Isabel, no nahita tanjona avy tamin'i Juanito sy Ochoa (roa) nahazo fandresena 3-1 tamin'ny lalao play-off farany nifanaovana tamin'ny CD Badajoz, ho an'ny Segunda División voalohany mitsidika.
Ny firosoana tany Estadio Multiusos de San Lázaro dia nifanindry tamin'ny fitomboan'ny haren'ny ekipa ary tamin'ny faran'ny taona 1993–94, taorian'ny fandresena 3-1 nanoloana an'i Rayo Vallecano, dia nahatratra ny La Liga ny Compostela. Tsara be ny zava-bitan'i Compostela, ary nahatratra ny famaranana tsara indrindra tamin'ny faha-10 tamin'ny 1995–96, nahazo ny fankasitrahana indrindra ny mpitokona Christopher Ohen sy Bent Christensen, izay nahatratra 23 ny tanjon'ny ligy.
Taorian'ny fizaran-taona efatra teo an-tampony, dia nesorina ny Compostela taorian'ny naharesy ny lalao famerenam-pialan-tsasatra ho an'i Villarreal CF tamin'ny fitsipiky ny tanjona lavitra, na dia nilalao baolina kitra manintona aza izy. Ny klioba koa dia saika hanomboka fihodinana ambany; taorian'ny fihemorana tamin'ny ambaratonga fahatelo tamin'ny taona 2001 dia niverina ny ekipa ny taona manaraka, saingy, tamin'ny fampielezan-kevitra manaraka, dia nilalao fanakorontanana ivelan'ny kianja, niaraka tamin'ireo mpilalao sy mpiasa tsy voaloa nandritra ny volana maro - ny toerana fahasivy farany dia tsy ampy sorohy ny famoahana toerana hafa, satria tsy nahatratra ny fe-potoana 31 jolay ny klioba mba handaminana ny trosan'ny karama.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=SD_Compostela&oldid=1000510"
Voaova farany tamin'ny 18 Janoary 2021 amin'ny 19:40 ity pejy ity.